Nhau - Yakanzwika zvinhu uye mamiriro ekushandisa
Felt zvinhu uye mamiriro ekushandisa
Kunzwa, zvinowanzoshandiswa maturusi muindastiri, anonyanya kugadzirwa nemvere dzemakwai, uyewo anobatsira mhou mvere kana faibha, kushandiswa kugadzirisa uye bonding.The chikuru unhu ari elastic, anogona kushandiswa kuvhunduka chiratidzo, chisimbiso, gasket uye elastic simbi waya tsono jira pasi. Inoshandiswa mumhando dzese dzemaindasitiri emuchina - anti - vibration, mafuta ekuzora, friction resistance uye mamwe maindasitiri.
Iyo inonzwa inogadzirwa nemvere dzemakwai uye inosungwa nekugadzira (isina-warp uye weft interweaving).Zvinhu zvikuru ndezvizvi:
1. Iyo elastic uye inogona kushandiswa se shockproof, sealing, gasket uye elastic simbi waya yetsono jira pasi rinonzwa zvinhu.
2. Kuita kwakanaka kwekunamatira, kusiri nyore kusunungura, kunogona kuvharwa mumhando dzakasiyana dzezvikamu.
3. Yakanaka kupisa kwekushisa kwekushanda, inogona kushandiswa sechinhu chekudzivirira kupisa.
4. Kurongeka kwakagadzikana, pores maduku, anogona kushandiswa sechinhu chakanaka chekusefa.Nekuda kwekuti density yekunzwa compact performance yakanyanya kugadzikana inogona kudzvinyirirwa kuti ibudise marudzi ose ezvikamu zvakanzwa.
5. Kupfeka kwakanaka kwekudzivirira, kunogona kushandiswa sezvinhu zvekupenya.
6. Iyo yakanyunguduka, saka inosungirirwa nenheyo ye shrinkage.Flint kusungirirwa nehuwandu hwehukuru, zvinyorwa zvakasiyana zvinogona kushandiswa zvakasiyana.
7. Iyo inonzwa ine scalability yakanaka uye inogona kusvika pakureba yakatarwa.Inogona kushandiswa kugadzira bhandi rematehwe uye bhandi rekukweva pulp kugadzira mapepa.
8. Iyo inonzwa ine kuchengetedzwa kwakanaka kwekudziya uye inogona kugadzirwa kuva inonzwika insoles yezvakasiyana-siyana.
9. Iyo inonzwa ine hunyoro uye elasticity uye inogona kugadzirwa sealing strips yemagonhi emotokari uye Windows nepakati mikova uye Windows.Haina kurukwa mukati meiyo yakanaka kusefa inogona kushandiswa kunyudza mafuta, ngarava iri pasi pedhiramu remafuta rinonyanya kushandiswa kunzwa. , kuitira kuchengetedza chikepe chakachena.Packing machine parts with feeling ine zvakanakira kuchena kwepamusoro, kutyisa kupikisa kwakanaka uye kuderedza inzwi.Chiridzwa chinogona kugadziriswa maererano nehukuru hwekunzwa.
Nguva yekutumira: Jul-22-2021